welcome to 2020 – MM Online Shopping
2020-01-03 2020-01-03 Cherry Mask
2019 ဖေဖော်ဝါရီ ၀န်းကျင်လောက်က ပစ္စည်းများတွေ့များလာလို့ MM ကနေရာတနေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ် …
page က စုစုပေါင်း ၆ခုဖြစ်ခဲ့တယ် . ..
msg ဖြေတာနောက်ကျလာတယ် အမှန်တော့ page အားလုံး ကို admin တယောက်တည်းက ဖြေရတော့ ကြာကုန်တာ ..
orderတွေ့ နည်းနည်းများလာတော့ မနိုင်မနင်းတွေ့ဖြစ်ပြီး မပို့ဖြစ်တာ မေ့ကျန်ခဲ့တာတွေ့အတွက် တောင်းပန်ရတာရှိလာတယ်
November တုန်းက Live လွှင့်နိုင်သေးတယ်
Dec ကျတော့ Live လုံးဝမလွှင့်နိုင်တော့ဘူး…
Live လွှင့်နေကျ admin အမေ ဆေးရုံတက်လို့ ၊ adminလက်ကျိုးလို့ စတဲ့ ပြဿနာတွေ့နဲ့ ၁လလုံးလုံး Live မလွင့်နိုင်ခဲ့ဘူး …
ပစ္စည်းရငွေချေစနစ်ကို OSတော်တော်များများက လုပ်လာကြပေမယ် ကျွန်တော်တို့ဘောစိရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် နယ်တွေ့ဆို ငွေကြိုလွဲစနစ်ပဲရှိနေသေးသော်လည်း ယုံကြည်စွာ ငွေလွဲဝယ်ပေးတဲ့ cu အရေအတွက်လည်းတိုးလာခဲ့တယ် …
ခြုံပြောရရင်တော့ ၂၀၁၉ က MMအတွက်တော့ တိုးတက်မူ ၁ခု ရခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ် …
အခု ၂၀၂၀ January ဒီလလည်း admin တွေ့ နေရာပြောင်းဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေရတဲ့အတွက် အလုပ်ရှုပ်နေတုန်းပဲ ဒီလ ၁၅ရက်နေ့လောက် နေရာပြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် … ဒီလ ၂၁၊၂၂၊၂၃ MM team က အပန်းဖြေခရီးထွက်ဖို့အတွက် ၃ရက်ပိတ်အုံးမယ်
နောက်လလောက်ကျရင်တော့ လုပ်ငန်းကို ဒီထက်ပို အာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ် …
မေ့တော့မလို့ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီဆိုရင် MM အစပြုခဲ့တာ ၅နှစ်ပြည့်ပြီး
၅နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအနေနဲ့ အလှူလေးလည်း ၁ခုလောက်လုပ်ဖြစ်အုံးမယ် အဲဒီအခါကျရင် cu တွေ့ကို အသေးစိတ်ပြောပေးပါမယ် ..
၂လပိုင်းလောက်ကျရင်တော့အ၀တ်အစားကို ဒီထက်ပို အာရုံစိုက်နိုင်လောက်ပါပြီး….
ဒီနေ့ ဒီအချိန်အထိ MM လိုဖြစ်တည်လာခဲ့တာ့ MM ကိုအားပေးတဲ့ မိတ်ဆွေ တယောက်ချင်းစီရဲ့ ကူညီမူကြောင့်ပါ .. အဲဒီအတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
လိုအပ်တာအများကြီးရှိနေတဲ့ MM ကို ဆက်လက်သည်းခံပေးပါအုံးလို့..